DHAGAXAANTII WAA LA QAADAY WELINA WAA HALKEDI. WAXBAA KU HOOS DUUGAN OGAADHOO | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii DHAGAXAANTII WAA LA QAADAY WELINA WAA HALKEDI. WAXBAA KU HOOS DUUGAN OGAADHOO
DHAGAXAANTII WAA LA QAADAY WELINA WAA HALKEDI. WAXBAA KU HOOS DUUGAN OGAADHOO
Wado la furay ma jirto. Dhagax waa la qaaday balse ciidan baa lagu jaray. Wax iska bedelay ma jirto oo wax aan BAJAJ aheyn oo maraya ma jirto markii hore BAJAJ waa socotay. Waxaana u arkaa in shirqool siyaasadeysan jiro. Ha is ilaaliyeen SIYAASIYIINTA mucaaradku Xaalka ma qurux badnee.
Hadii wadooyinka la furay maxuu isu bedeli waayey isu socodka daxweynahu. Maxaa gaadiidka loo diidan yahay. Maxaa ka dambeeya. Maxaa is bedelay. Sugitaanka Amnigii miyaa qorshe cusub loo helay. Waxay aheyd dowladu inay bulshada la wadaagto sababta dhagxaanta loo dhigay markii hore iyo sabab cad oo looga maarmay. Ma jirto wax at inoo sheegtay oo aan aheyn in loo xanuynayo Shacabka. Taasina ma aha jawaabo inagu filan.
Hadii ay dhab tahay in Shacabka loo daneynayo ugu yaraan gaadiidka daxweynaha ee BL-ka maxaa u diiday inay ka gudbaan goobahi dhagxaanta laga qaaday. Xitaa ha la celiyo gaadiidka sida gaarka ah loo leeyahay. Dhagxaantii waa la qaaday. Welina waa halkeedi waxbaa ku hoos duugan ogaadhoo.
Previous articleTaliyahii Ciidanka Danab oo Xilka laga qaaday masuul kalana loo magacaabay
Next articleOdowaa oo Caawa u hooyday magaalada Balad xaawo
Sweden oo ku guuldareesatay isku day lagu musaafurin lahaa 81 Qof...
Magacyada Wasiirada iyo Xildhibanada diidan in Gobolka Banaadir Matalaad yeesho